ရွှေညာသူလေး ရဲ့ပေါက်ကရ အတွေးများ: ..ဟယ်....ဟယ်....ဟယ်တော့...
ရွှေညာသူလေး ရဲ့ပေါက်ကရ အတွေးများ
ღ♥ღღ♥ღ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးတယောက်ပါ.... ရေးချင်တာ လျှောက်ရေးပါသည်..ღ♥ღღ♥ღ.
Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 2:29 AM
Reading your blog in December 2020. :-)
I wish I know who you are.
ဖတ်ပီးရင်တော့ နဲနဲလောက် မန့် ခဲ့နော်....
۩ မိုးစက်လေးရဲ့ မောင်နှမလေးတွေပါ ۩
Android အတွက် Apk ဖိုင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖန်တီးမယ် - *Android အတွက် Apk ဖိုင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖန်တီးမယ်* *လွယ်ပါတယ် အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ် အဆင့်နှစ်ဆင့်ထဲနဲ့ Apk file လေးတွေကို Online ပေါ်မှာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း...
ဇာနည်မောင် ရဲ့ ရင်ထဲကခံစားချက် ကဗျာများ
ကမ္ဘာမကြေဘူး - နှစ်တွေ နှစ်ဆယ့်သုံးတလီတိတိ ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့်မေ့မရသေးဘူး အတိတ်ဆိုပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီဆိုးညစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာ ပါးစပ်ရာဇ၀င်တခုမဟုတ်ခဲ့ဘူး --- ။ ဗိုလ်နေ၀င်းကြိမ်းဝါးခ...
အမွေစစ် - အမွေဆိုတာ မိဘဘိုးဘွားတွေ ချန်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း၍ရယူခြင်းကို ခံယူရခြင်းလို့ဆိုလိုသလို နောက်အခြားတစ်မျိုးအနေနဲ့ဆို မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ အကျင့်သိက္ခာ...
ရွှေညာသားလေးများဆုံဆည်းရာ မှ ကြိုဆိုပါ၏..
☼ မိုးစက်လေးရဲ့ ဂျီမေးပါ ☼ ☼shwenyarthulay.princess☼
ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးပါ..စိတ်ထဲရှိရာ အကုန်လျှောက်ရေးပါတယ်.. အမြီးအမှောက် တည့်ချင်မှ တည့်ပါလ်ိမ့်မည်.. သည်းခံတော်မူကြပါချင့်. အရမ်းဆိုးသွမ်းနေသောကောင်မလေး မဟုတ်ပါနော် .ခင်တဲ့သူများကိုသာဆိုးပါသည်..အားလုံးကိုခင်ပါတယ်... မမန့် ပဲ ပြန်သူများ နောက်ဘဝထိ အပျိုကြီး လူပျိုကြီး များ ဖြစ်ပါစေ...ခစ်ခစ်ခစ်ခစ်... ချိတ်ချိုးရဝူးနော်..
☼☼ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ လာရောက်လည်ပတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ချစ်သောသူငယ်ချင်းများပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင့်☼☼
ရွှေညာသူလေး ရဲ့ပေါက်ကရ အတွေးများ © 2008. Design By: SkinCorner